Khabiirka Cilmiga ah wuxuu ogaanayaa sida loo guuleysto Natiijooyinka Raadinta Bulshada
Mashiinnada raadinta waxay fursad u helayaan ganacsiyada doonaya inay qayb ka mid ah darajooyinka raadinta u sheegaan. Si kastaba ha ahaatee, iyagu ma fududa in ay la shaqeeyaan iyaga. Waa sababta ay u cusbooneysiinayaan nidaamyadooda gaaban oo si joogta ah wax uga bedelaan bandhigga raadinta waqti ka waqti - rastrelliera portabici usata. Taabashooyinkani badanaa ma jecla ganacsiga yaryar ee isku daya in ay helaan faa'iido ay ku bartilmaameedsadaan goobaha deegaanka. Xayeysiinta lacag bixinta ayaa ku sifoobey liiska hantida raasumaalka ah ee ku yaal bogga ugu horeeya ee bogga bogga saadka.
Isticmaalida SEO-ga ayaa aad u gubay by suuqyada doonaya in ay jaraan geesaha iyadoo la adeegsanayo xeelado khad madow iyo isku xirka dhismaha taas oo ah sababta Google ma fududa. Kuma eedayn kartid inay sidaa sameeyaan: waxay sidoo kale doonayaan in ay macaamiishooda ku qanacaan.
Haddii aan goobta laga helin bogga hore ee SERP, ka dibna wax badan maaha in ganacsigu helo. Ganacsiga yaryar ee raba inuu magac magaciisa u sameeyo waa inuu raadiyaa meelo kale si uu u caawiyo. Fursadaha ayaa ah in aysan haysan miisaan ku filan oo lagu tartamayo shirkado kale oo sareeya oo ku sifoobaya natiijooyinka raadinta iyadoo la raacayo taraafikada organic.
Maamulaha Guusha Macaamiilka Adeegyada Dijital ah, Ivan Konovalov, ayaa muujinaya maqaal ku saabsan sida laysugu daro SEO-ga saxda ah, oo leh xayeysiis-riix-riix-riix, iyo bartilmaameedka raadinta maxaliga ah si ay u garaacaan tartanka sida sidoo kale sida mashiinka raadinta isbedel.
Istaraatiijiyada Raadinta ee Lagu Ciyaaro ee Ganacsiga yaryar
Dadka doonaya inay suuq-gashiga raadinta ku xiraan shirkaddooda, waa inay bixiyaan lacagta ciyaaraha haddii ay tahay inay arkaan wax natiijo ah. Qalabka mobile waxay qaataan laba xabbo si ay u arkaan natiijooyinka organic. Sidaa daraadeed, xayeesiinta lacag-iibsashada ah ayaa ah sidaa daraadeed ma aha habka ugu wanaagsan ee aad u sii wadi karto suuq-geynta ganacsiga yar yar Intaas waxaa dheer, taasi waxay qaadataa waqti badan iyo ilo dhaqaale kahor inta qofku la kulmo gaadiid macno leh, gaar ahaan haddii tartanka adag yahay.
Xalka ayaa ah in la isku daro waxoogaa SEO ah, qaar ka mid ah PPC, iyo tinge ah ficilka maxaliga ah kaas oo hubiya in sare loo qaado dhammaan dadaallada iyo natiijooyinka. Tallaabooyinka soo socda ayaa sharaxaya sida loo sameeyo tan:
# 1 Dib u eegista xogta
Hubi in dhammaan ereyada muhiimka ah ee la isticmaalo ay yihiin kuwo la socda. Ka faa'iideysi ereyada muhiimka ah ee baaritaanka gudaha bogga internetka, iyo kuwa lagu soo wargeliyay in ay ka sarreeyaan Google Analytics, iyo qalabyo kale sida Search Console, iyo Adwords . Isticmaalida qalabka sida SpyFu, isbarbardhig sida fikradahan muhiimka ah uga soo horjeeda warbixinnada isbeddelka warshadaha.
# 2 Go'aansan Miisaaniyadda
Isku celcelinta qiyaasta qarashka-per-click wuxuu ku sheegayaa inta uu qofku u isticmaali doono ololaha
# 3 Hel Local
Iyadoo macluumaadka la ururiyey ee ku saabsan ereyada muhiimka ah, ku darso tusayaasha maxalliga ah ee gobol kasta oo ganacsiga u adeega. Isticmaalidda ololeyaasha lacag-bixinta ee lacag-bixinta:
Abuuri kooxo bartilmaameedka ah oo loogu talagalay goob kasta
Ku dar ereyada muhiimka ah si aad u hesho booska
Ballaarinta AdWords oo ay ku jiraan ereyada muhiimka ah
Qor qoraalka ku-biirinta ee dadka degaanka oo kaliya fahmi kara
Ku dar talooyin
# 4 Intertwine PPC iyo SEO
La soco PPC-da maxaliga ah si aad u ogaato waxa ka shaqeeya taraafikada organic, iyo kan u shaqeeya SEO-ga mushaharka leh. Haysashada qoraalka muhiimka ah ee ereyada muhiimka ah, waxay noqoneysaa mid sahlan in la isku daro kuwa ku guuleysta abaalmarinta, iyo kuwa organic
Ma aha miisaaniyadda shirkadda go'aamisa sida ganacsiga yaryar uu ugu sarreeyo SERP. Taa baddalkeeda, adoo isticmaalaya istaraatijiyad tayo leh oo ay ka mid yihiin SEO, PPC iyo labadaba labadaba waxay hubineysaa booska qiimeynta sare